Carl Bildt ayaa xaqiijiyey ciidamo loo dirayo dalka Maali - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iswiidhen oo laga yaabo inay 200 oo askari u dirto dalka Maali. Sawirle: Alexander Karlsson/TT.
Carl Bildt ayaa xaqiijiyey ciidamo loo dirayo dalka Maali
La daabacay torsdag 20 februari 2014 kl 14.46
Iswiidhen ayaa ciidamo militeriga ka tirsan oo u tababaran hawlaha sirdoonka u direysa dalka Maali si ay uga qaybqaataan hawlaha nabad-ilaalinta oo QM halkaas ka wadaan. Waxay u badan tahay in ciidamadaasi halkaas joogi doonaan ugu yaraan hal sano. Sidaasna waxaa xaqiijiyey wasiirka arrimaha dibedda Carl Bildt kadib uu xisbiyada baarlamaanka la yeeshay kulan uu ku wargelinaayey oo ka dhacay xafiiska guddiga arrimaha dibedda maalintii talaadada gelinkii hore:
– Waxaan codsi rasmi ah ka helnay Qaramada Midoobey, annaguna waxaan dooneynna inaan sida ku habboon uga jawaabno.
Mar Carl Bildt la weyddiiyey haddii ay hawlahaasi noqon doonaan kuwo waqti dheer socda wuxuu ku jawaabay:
– Marka ciidamo loo dirayo meel sidaan oo kale ah waa in lagu xisaabtamaa muddo sannad ah, kadibna tallaabo tallaabo loo qaadaa hadba inta la sii joogayo. Waxyaalo badan ayaa loo baahan yahay in la sii dhiso waayo waxba halkaas kama jiraan. Kharash ballaaran ayaana ku bixi doona hawlaha bilowga ah, sidaas awgeed ayey macquul u noqoneysaa in muddo la sii joogo.
Wasiirka arrimaha dibedda Iswiidhen ayaa maalintii isniinta ka soo noqday booqasho ku tegey dalka Maali, halkaas oo uu ugu kuurgelayey xaaladaha ay ciidamada iswiidhishku halkaas ka filan karaan.
QM ayaa horay dowladda Iswiidhen uga codsatay in ay hawlaha nabad-ilaalinta QM ka waddo dalka Maali ugu deeqdo guuto ciidamo ah oo qaabbilsanaan doona hawlaha sirdoonka iyo xog-ururinta. Baarlamaan ayaa la filayaa in uu go’aan ka gaaro diridda ciidamadaan xilliga gu’gaan foodda nagu soo haya, sidaas awgeed ayaan weli la ogaan karin waqtiga ay ciidamadaasi halkaas tegi doonaan. Waxaana arrimo dhawr ah oo loo baahan yahay in madaxa lagu hayo, kuwaas oo ay ka mid yihiin in laga fekero xilliga ay roobabku da’aan iyo in marka hore la dhiso saldhiggii ay ciidamadaasi degi lahaayeen.
Sida ay iadaacadda Ekot soo xigatey waxay tirada ciidamada laga xaajoodey dhan yihiin 200 askari, laakiin laga yaabi in ay tiradaas ka bataan.
– Waxay noqon karaan ilaa dhawr boqol, ciidamo intaas ka badan ma noqon doonaan, ayuu yiri Carl Bildt.
Xisbiga Socialdemokraterna ayaa isaugu muujiyey in uu ku qanacsan yahay hawlaha gurmadka ah. Wuxuu kaloo xisbiga horay u sheegay in loo baahan yahay in Iswiidhen ka qaybqaadato hawlaha nabad-ilaalinta oo ay QM qabanqaabiso.
– Mar haddaan awoodno oo aan ciidamo iyo aqoonba leenahay, waxaan qabnaa in ay habboon tahay in ay Iswiidhen oggolaato marka QM weyddiisato in laga caawino hawlaheeda nabad-ilaalinta. Mar walbana taas ayaa ah mowqifkayaga asaasiga ah. Sidaasna waxaa yiri afhayeenka xisbiga S u qaabbilsan arrimaha siyaasadda dibedda Urban Ahlin.
Hoggaamiyaha xisbiga Bidixda Jonas Sjöstedt ayaa ka dhawaajiyey in uu u riyaaqsan yahay in laga qaybgalo hawlgalada QM iyo in xisbigiisu taageeri doono hindisahaas.
Carl Bildt ayaa sheegay in aysan waqtigaan hadda Iswiidhen halkaas u diri doonin ciidamo dagaalama oo aan ka ahayn kuwo ilaalo ah haddii loo baahdo. Hawlaha dagaalgalka waxaa u xilsaaran ciidamada Afrikaanka.
Afhayeenka arrimaha siyaasadda dibedda ee xisbiga S Urban Ahlin ayaa qaba in ay wanaagsan tahay in hawlaha ciidamada iswiidhishku ay ku ekaato hawlaha sirdoonka isagoo hadalkiisa ku sii daray:
– Hawlahoodu waxay ku saabsan yihiin xog-ururinta iyo sirdoonka oo aan dareensanahay in aad loogaga baahan yahay dhulkaas maadaama aqoonta aan u leenahay ay yar tahay oo weliba intaas dheer tahay in uu yahay dhul xuduudadiisa daldaloolo ku jiraan oo ay ku sugan kooxo argagixisooyin ah. Markaas waa wax macquul ah in hawlaha sirdoonka kaga qaybgalno, ayuu yiri Urban Ahlin.
Dhanka kale caalin la weyddiiyey haddii ay Iswiidhen uga iman karto khatar aargudasho hawlgaladaan ay qaybqaadaneyso, wuxuu ku jawaabey in ay feker ahaan khatari mar walba jirto, balse isla markaasna ma ahan mid welwel weyn laga qabi karo:
– Marka laga hadlayo khatarta argagixisada caalamka, waxaa la oran Maali waxay weli ka mid tahay dhulalka ka baxsan meelaha laga filayo. Wixii falal argagixiso ah ama haddii ay awood leeyihiin waxay marka hore ku abbaari lahaayeen dalka Faransiiska oo ciidamo halkaas ka joogaan. Balse mar walba khatar ayaa ku soo wajahan ciidamada aan halkaas geynno. Sidaasna waxaa Mats Utas oo ah cilmi-baare ka hawlgala machadka culuunta Afrika ee waqooyiga Yurub.